फ्रिजमा राखेको अन्डा खादा स्वाथ्यलाई हुने नराम्रो असर, जानी राखौ - ज्ञानविज्ञान
धेरै जसो हामी खानेकुरा ताजा राख्न फ्रिजको प्रयोग गर्छौं तर हामीलाइ थाहा छैन कि फ्रिजमा राखेको खानेकुराहरुले काँही न काँही हाम्रो स्वाथ्यमा नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ । त्यसै गरी अन्डा पनि फ्रिजमा राख्छौं । तर, अन्डालाई फ्रिजमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । फ्रिजमा अन्डा स्टोरेज गर्दा फाइदा होइन, नोक्सानी हुन्छ ।
अन्डा फ्रिजमा राख्दा के के नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ
फ्रिजमा राखिएको अण्डामा ब्याक्टेरिया पस्ने सम्भावना हुन्छ । यो स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुने नै भयो । यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
यसरी आउँछन् अण्डामा ब्याक्टेरिया
अण्डालाई फ्रिजमा राखेपछि त्यसलाई फेरि सामान्य तापक्रममा राख्दा कन्डेनसेसन ग्यासबाट लिक्वीड बन्ने प्रक्रिया बढ्छ । कन्डेन्सेसनबाट अण्डाको बोक्रामा रहेको ब्याक्टेरियाको गति बढ्न सक्छ । यसबाट अण्डाभित्र ब्याक्टेरिया पैदा हुन्छन् जुन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ ।
अण्डालाई फ्रिजमा राख्दा यसभित्रको तापमानमा पनि उतारचढाव आउँछ । यदि तपाईं अण्डाको प्रयोग बेकिङ प्रोडक्ट बनाउनका लागि हो भने त्यसलाई फ्रिजमा नराख्नु नै उचित हुन्छ । किनकी बनाउने बेला यसमा निकै समस्या पर्छ ।
यदि तपाईं फ्रिजमा अन्डा राख्नुहुन्छ र पछि त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई फिट्न अपेक्षाकृत मुस्किल हुन्छ । जसले गर्दा रंग र स्वादमा फरक पर्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्‍याउँछ ।
अण्डा किनेर ल्याउनासाथै तुरुन्त यसलाई उमाल्नका लागि राख्दा फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, यदि तपाईंले फ्रिजमा राखिएको अण्डा उमाल्नुभयो भने फुट्ने सम्भावना बढि हुन्छ । यसले अण्डाको पोषणमा असर गर्छ ।
फ्रिजमा राखिएको अण्डा संक्रमित पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ अण्डाको माथिल्लो भागमा फोहोर रह्यो भने त्यसले फ्रिजमा राखिएका अरु चिजहरुलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ । यस्तोमा अण्डालाई फ्रिजमा राख्दा कयौं प्रकारका संक्रमणका खतरा रहन्छ ।
यसमा कुनै शंका छैन कि फ्रिजमा अण्डा धेरै दिनसम्म सुरक्षित रहन्छ । तर फ्रिजमा अत्यधिक चिसो हुने कारणले अण्डाका केही पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छन् । कोठाको तापक्रममा राखिएका अण्डा फ्रिजमा राखिएका अण्डाको तुलनामा बढि स्वस्थकर हुन्छन् ।
अण्डाको सेवनले शरीरलाई धेरै फाइदा मिल्छ । अण्डामा प्रोटिन, क्याल्सियम र ओमेगा २ फ्याटी एसिड उचित मात्रामा पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । यसबाट शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन मिल्छ । त्यसैले हरेक दिन बिहान अण्डा सेवन गरौं ।
Topics #अन्डा #फ्रिज #ब्याक्टेरिया #संक्रमण
Don't Miss it यस्तो अवस्थामा न खानुस केरा, ज्यान जाने सम्भावना – जानी राखौँ
Up Next राति सुत्नुअघि नुहाउँदा हुने ७ फाइदा,जानी राखौ
गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिनामा सुरक्षा नअपनाए मृत शिशु जन्मिने सम्भावना
गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिना गर्भवती महिला सुत्ने बेलामा कसरी सुतिएको छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने तर सुत्दा कोल्टे परेर सुतेको…
बाल्यकालको व्यायामले मोटोपन र क्यान्सरको सम्भावना कम हुन्छ । आफ्ना बच्चालाई व्यायाम गराउँनुहोस्
सन्तुलित भोजन र नियमित व्यायामलाई पुस्तौंदेखि स्वस्थ रहने र जीवनशैलीका कारण लाग्नसक्ने रोगको जोखिम न्यून गर्ने उपाय मानिँदै आएको छ…
जाडोमा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ, यसलाई बढाउनका लागि केहि प्राकृतिक विधी यस्ता छन्
पर्याप्त निद्रा आयुर्वेदमा पर्याप्त निद्रालाई सबैभन्दा राम्रो मानिएको छ । जाडो मौसममा कुनै व्यक्तिका लागि पर्याप्त निद्रा आवश्यक हुन्छ ताकि…
यी फलफूलका बोक्राका फाइदा यस्ता छन्
काँक्रो – काँक्रोको बोक्रा खाने गर्नाले हड्डी बलियो बन्छ । – काँक्रोको बाहिरी भागमा भिटामिन ए र के प्रचुर मात्रामा…
संसारभरीका सबै मानिस शाकाहारी भए के होला ? यस्ता छन् केहि असर
जाडो मौसममा काँचो बेसारका फाइदाहरु यस्ता छन् कि तपाई सँधै सेवन गर्नुहुनेछ
जाडो मौसममा काँचो बेसारको एक टुक्राको उपयोग सबैभन्दा अधिक लाभदायक हुन्छ र यो समयमा बेसारले प्रयोगले हुने फाइदालाई कयौँ गुणा…
यस्ता छन डिप्रेसनका लक्षण र उपचार बिधि
के हो डिप्रेसन ? डिप्रेसन एक प्रकारको मानसिक रोग हो। यसले पीडित व्यक्तिको व्यवहारमा फरक ल्याउनुको साथसाथै शारीरिक तथा मानसिक…
​बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छोडीहल्नुहोस
​बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी अनिद्राजन्य रोग पनि हो । निद्रा पूरा नहुँदा व्यक्तिले थाकेको अनुभव गर्छ । लक्षणहरूका आधारमा रगतको…
अन्तरिक्ष स्टेशनमा पाँचतारे होटल खोल्दै छ रुस |
रूसको अन्तरीक्ष एजेन्सी रोसकोसमोसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा एउटा पाँच तारे होटल बनाउने तयारी थालेको छ । यो होटल विश्वका धनाढ्य…